Mamnuucidda Qaadka Waqtigey Doontoba Hanoqotee
Marka hore waxaan kamid ahaa dadka soo tijaabiyey dhibaatadada uu leeyahay Qaadka ha ahaato dhinaca caafimaadka, dhaqaalaha, dhaqan xumada, iyo Aqal dumintaba.
Intaas oo dhan marka lafiirshana wax faa'iido ah oo lataaban karo oo uu leeyahayna majiraan. Dadka qaarkiis waxay ku doodaan in uu shaqa u abuuray dad badan laakiin dadka Yaqaana cilmiga Dhaqaaluhu waxaay qabaan mid ka duwan midka ayqabaan kuwaan kor ku soodheegnay oo ah:
in uu san qaadku wadanka soo galin habba yaraatee wax dakhli ah oo lacag adag ah oo dalku aad ubaahanyahay wakhtigan xaadirka ah balse waxa uu ka bixiyaa xoo-gaaga (inta yar) oo laga hello xoolaha ladhoofiyo iyo Lacagta biilka ay ugu soo diraan dadka dibada jiraa eheladooda.
Ma abuuro waxshaqo ah oo la taaban karo balse taas cagsigeed waxaa uu lumiyaa waqti iyo xoogbadan oo looga faa'iidaysan lahaa in wax lagu soo saaro ama dhaqaale lagu abuurilahaa sababtoo ahaa waxaa dadkeena waqtiga shaqada gaaray ay waqtigoo intiisa badan ku limiyaan raadinta iyo cunidiisa.
Waxaa uu ladagaalamaa dakhliga fardiga ah iyo kan guudba.
Waxaa uu dhiirigaliyaa in Qaadcunuhu uu si toos ah iyo si aan ahaynba ugu talaxtago hantida guud ee ummadu leedahay iyo tan gaarba marka uu waayo ilkale oo uu dakhli ka hello lacag uu ku iibsado qaadka uu cuni lahaa.
Ku waas iyo kuwo kale oo badan oo aanan halkaan ku soo koobi karin marka la eego qaadka waxaa uu mudanyahay waxaa weeye oo kaliyo in wadanka laga mamnuuco haddii loo hello awoodii iyo dhaqaalihii lagu fulinlahaa arintaas goortaydoontaba hanoqotee.
Akhri qaybtii hore (Back)